Madaxweyne Farmaajo oo Saacadaha soo socda ku dhawaaqi Doono Ra iisal wasaare | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo oo Saacadaha soo socda ku dhawaaqi Doono Ra iisal wasaare
Madaxweyne Farmaajo oo Saacadaha soo socda ku dhawaaqi Doono Ra iisal wasaare
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa laga yaabaa in saacadaha soo socdo si rasmi ah u magacaabo Ra’isul Wasaaraha cusub ee badali doona Ra’isul Wasaarihii lama filaanka ku baxay ee Xasan Cali Kheyre.
Sida aan wararka ku heleyno Madaxweyne Farmaajo ayaa soo gabo gabeeyay inta badan wadatashiyo uu la sameenayay lataliyaashiisa oo ku aadanaa shaqsiga ku haboon ee xiligan loo magacaabi karo xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo xubnaha ku dhaw dhaw ayaa xog wareysi la yeeshay shaqsiyaad dhoor ah oo doonaya in ay qabtaan xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo kuwa iyadu la jeclaatay Madaxtooyada.
Wararka aan heleyno ayaana sheegaya in Madaxweynaha iyo kooxda ku gadaaman ay kala shaandheyn ku sameeyeen musharaxiin badan oo isku soo taagay qabashada xilka Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya.
Waxaana isku soo haray shaqsiyaad kooban oo midkood la filayo in Madaxtooyada soo xulato si uu u noqdo Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee hogaamin doona mudo xileedka dowlada u harsan iyo hadii ay hirgasho damaca Villa Somalia ee mudo kororsiga.
Musharaxiinta usoo istaagtay qabashada xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu xirayay shuruudo badan oo qaarkood diideen halka kuwa kalana ay ogolaadeen shuruudahaasi.
Shuruudaha ayaana waxaa la sheegay in ay kamid ahaayeen in qofka qabanaya xilka Ra’isul Wasaaraha uusan soo galin damaca qabashada xilka Madaxweynaha, in uu raali ka yahay mudo kororsi iyo in uu qeyb ka noqdo xisbiga Nabad iyo nolol.
Waxaa wali adag in farta lagu fiiqo qofka uu ugu dambeyn Madaxweyne Farmaajo u xulan doono qabashada xika Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, waxaana aad loo hadal hayaa shaqsiyaad caan ah oo dowlada horey ugu tirsanaa in midkood xilkan loo magacaabo.
Previous articleKenyan Khat farmers complain about Somali government
Next articlePresident Farmajo to announce new Prime Minister in the coming hours
Xalku wuxu ku Jiraa Madaxda Dowlad Goboleedyada oo lala Shaqeeyo